Diidmada gelida oo markaas bilaabanayo - Migrationsverket
/ Diidmada gelida oo markaas bilaabanayo
Avvisning som ska genomföras omedelbart – somaliska
Wakaalada Socdaalka Swedish ayaa u sameyso amarka diidmada gelitaanka oo markaas ka bilaabanayo haddii ay cadahay in midkoodna aanadd lahayn baahida illaalada ama aanad lahayn sababo kaleoo oggolaanshaha daganaashaha ah. Haddii aad heshid amar noocaas ah, waa in aad Sweden si degdeg ah uga baxdaa.
Go'aanka lagu diidayo in codsigaagu dhaqan gal sii ahaado ilaa afar sannoood. Haddii aad heshid amarka diidmada ee gelitaanka oo leh dhaqan gal degdeg ah, waxaa lagugu soo rogi mamnuucida dib usoo gelida, ma taas oo micnaheeda yahay ma geli kartid wadan walba oo Aaga Schengen, ama Romania, Bulgaria, iyo Croatia, ugu yaraan labo sanno.
Sidoo kale waad tilmaami kartaa in aad ogolaatay amarka adiga oo saxiixaya warqada loo yaqaan bayaanka oggolaanshaha. Marka aad saxiixdid ku dhawaaqida, markale kama racfaan qaadan kartid oo waa in aad ka tagtaa Sweden isla markaas. Xitaa haddii aadan ogolaanin amarka waa in aad ka tagtaa Sweden kadib helida amarka.
Ka racfaan qaadashada amarka
Haddii aadan oggolaanin amarka waxaad xaq u leedahay in aad ka racfaan qaadatid, laakiin waa in weli ka tagtaa Sweden isla markaas. Racfaankaaga waa in ay helaan Wakaaladaha Socdaalka ugu dambeynta sadex todobaad oo la soo ogeysiinayo amarka.
Akhri wax badan oo ku saabsan ka racfaan qaadashada amarka
Qorsheynta safarkaaga laabashada
Waxaa lagaa rabaa in aad Sweden islamarkaas ka tagtid kadib markaad heshid amarka. Adiga ayaa masuul ka ah qorsheynta safarka noqoshadaada, oo helaya baasaboor ansax ah, iyo shuruudaha kale oo ku noqoshada wadankaaga asalka ah ama wadan kale marka aad haysatid oggolaanshaha dagananaanshaha. Wakaalada Socdaalka way taageeri kartaa iyo kugu caawin kartaa xiriiriada wadankaaga asalka ama diyaarinta safarka.
Akhri wax badan ku saabsan ikhtiyaar ugu noqoshada
Hoyga, kaarka bangiga, iyo Kaarka Magangalya doonka
Sadex todobaad helida kadib amarka aadan markale ka racfaan qaadaneynin. Tani waxay la micna tahay in aadan markale laheyn xaquuqda hoyga ama taageerada dhaqaalaha ee Wakaalada Socdaalka. Tani waxay adiga ku quseyneysaa haddii aad tahay qof weyn oo aan la nooleyn caruurta ka yar 18 sanno jir da'da ah ama aa tahay masuulka.
Ka hor ka tagida Sweden waa in aad soo celisaa Kaarkaaga Magangalya Doonka (kaarka-LMA) ee Hay'ada Socdaalka. Haddii aad heshay kaarka bangiga ee ka imaanaya Wakaalada Socdaalka, waa in aad kala baxdaa lacagta akoonka iyo kaarka soo celisaa. Haddii aad ku noolaatay mid ka mid ah hoyada Wakaalada Socdaalka, waa in aad ka tagtaa hoyga oo soo celi furayaasha.
Daryeelka caafimaadka iyo dugsiga
Ilaa maalinta aad ka tagto Sweden waxaad heleysaa isla xaquuqda ee adeega caafimaadka sida hore oo kale, laakiin ma heleysid wax magdhow dhaqaala ah oo daawooyinka ama daryeelka caafimaadka ah marka amarka ka tagida ay dhaqan gasho iyo xaquuqdaada taageerada dhaqaalaha ay dhacday muddadeedu.
Carruurta waxay xaq u leeyihiin in ay dugsiga aadaan haddiiba ay Sweden joogaan.
Akhri wax badan ee ku saabsan carruurta iyo magangalyada
Haddii aadan u hogaansamin go'aanka
Haddii aadan la shaqeynin adiga ka tagayo Sweden, Wakaalada Socdaalka waxaa laga yaabaa in ay go'aansadaan in ay kugu hayaan kormeerida ama xabsi kugu hayaan. Kormeerida micnaheeda waa in aad saxiixdaa sharciga Wakaalada Socdaalka iyo Booliska. Haddii lagu hayo xabsiga, waa in aaad joogtaa xarun xiran adiga oo sugaya bixitaanka.
Haddii weli aadan xaq ulaheyn taageerada dhaqaalaha ee ka imaaneyso Wakaalada Socdaalka (tusaale. qoysaska carruurta leh), waxaad heleysaa kaalmo joogta ah oo la dhimay haddii aadan ka shaqeynin ka tagida wadanka.
Haddii Wakaalada Socdaalka go'aansato in xoog loo baahanayo si loo fuliyo amarka, masuuliyada waxaa lagu wareejiyaa Booliska Swedish.
Akhri wax badan oo ku saabsan waxa dhacayo haddii aadan u hogaansamin go'aanka
Dhacdooyin cusub diidmada kadib
Haddii wax dhacaan waxay ka dhigtaa mid aan macquul aheyn in aad adigu ku laabatid, waa in aad soo ogeysiisaa Qeybtaada Soo dhaweynta. Wakaalada Socdaalka waxay tixgelineysaa joogitaanka ka xanibida mastaafurinta. Xanibaada noocaas waa in ay la macaamishaa macluumaadka cusub oo soo baxaya marka aad heshay go'aanka.
Akhri waxbadan oo ku saabsan dhacdooyinka cusub